KARACHI: Umbango oqhubekayo phakathi kwePakistan Cricket Board nabanikazi bama-franchise ePSL uthole ijubane ngoMgqibelo lapho wonke amaqembu ayisithupha ekhipha isitatimende ngokuhlanganyela esola ibhodi ngokuthi "alizimisele" ukuphendula izikhalazo zabo.
Isitatimende sithi ama-franchise anokungabaza okukhulu ngohlelo olukhona lwezezimali kanye nemodeli yePSL.
“I-PCB ikhombise ukungazimiseli ukuxoxa, ukubhunga ngamabomu, noma ukubukeza leli lungiselelo ngendlela engathi sína, nokuphoqa isandla sama-franchisee kaninginingi. Kusukela kwasungulwa lolu phiko, ama-franchisees ngokuhlanganyela alahlekelwe yimali eyizigidigidi ngesikhathi i-PCB isizuze izigidigidi, ”kusho isitatimende.
Isitatimende esihlanganyelwe silandele isicelo esihlanganyelwe ngabanikazi bama-franchise eNkantolo eNkulu yaseLahore sokuphikisana ne-PCB.
Lesi sitatimende siqhakambise ukuthi ama-franchise e-PSL azame ngayo yonke indlela ukuxazulula lolu daba ngokuthula ne-PCB kodwa ukungavumi kwebhodi nokwehla okuqhubekayo kubenze bafuna indlela yomthetho.
"Ngenxa yokulahlekelwa kwethu kulezi zikhathi ezinhlanu ezedlule nokuthi i-PCB ayizimisele njalo ukucubungula izikhalazo zethu ngokungathi sína, bonke abantu abanamalungelo okuthengisela amalungelo ayisithupha bavinjelwe ukuya eNkantolo eNkulu yaseLahore bephikisana ne-PCB," kusho isitatimende.
“Sithanda ukuphinda futhi ngalesi sikhathi, ukuzibophezela kwethu ngokuqinile kulo mdlalo, futhi sicacise ukuthi amafranziseya ePSL abelokhu ezama ukuxazulula izingxabano zawo ne-PCB ngokuthula nangaphandle kokuphazanyiswa yiqembu lesithathu. Kodwa-ke, ukungajabuli kwe-PCB ekubhekaneni nezikhalazo zethu kusishiye singenayo enye indlela ngaphandle kokuthi udaba lunqunywe yinkantolo, ”kwengeza.
Ngokwe-Writ Petition efakwe kwi-LHC, ikhophi yayo ikwiGeo.tv, abanikazi bama-franchise e-PSL (abafaka izicelo) bacele ukuthi i-PCB iqondiswe ukuze ilalele izikhalazo, imodeli yezimali ibuyekezwe, futhi nesicelo esifakiwe simiswe kuze kube izikhalo sezilungisiwe.
Izikhalazo zama-franchise e-PSL ane-PCB zaqala ukubonwa ngo-Okthoba 2018 ngenkathi kuthunyelwa incwadi ehlangene yabanikazi bama-franchise ku-PCB ifuna ukuthi inani ledola lilinganiselwe futhi kubuyekezwe ifomula yokwabelana ngemali.
Ezinsukwini ezilandela leyo ncwadi, i-PCB yayinqamule iSchon Group njengabanikazi beMultan Sultans. I-franchise kamuva yathengwa ngu-Alamgir Tareen ngemuva kokwenza ibhidi ephezulu kakhulu.